ShweMinThar: ယနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများကို အစုအဖွဲ့အလိုက် ဘယ်လိုထင်မြင်ကြသလဲ?
ယနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများကို အစုအဖွဲ့အလိုက် ဘယ်လိုထင်မြင်ကြသလဲ?
လာမည့် နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သမိုင်းက ပေးလာသည့် နိုင်ငံသားများ၏ ထူးခြားသော အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းမိဒီယာများနှင့် နားလည် တတ်ကျွမ်းသူ၊ လေ့လာသူများက ရှုထောင့်မျိုးစုံဖြင့် ဖော်ပြနေကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသလို၊ ရှုပ်ထွေး၍ နားလည်ရခက်သည်များလည်း အပါအ၀င်။
ယင်းသို့ရေသားဖော်ပြခြင်းသည် အရေးကြီးသလို ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်မှာလည်း သုံးလခန့်သာ လိုတော့သည်။
နိုင်ငံရေးစနစ် တစ်ရပ်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ ချီတက်နေသည့် လက်ရှိစနစ်၏ အခြေခံမှာ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဖြစ်သည်။ ယင်းစနစ်သည် နိုင်ငံရေး အားပြိုင်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲ၍ ပိုမိုအလုပ်ဖြစ်သော နိုင်ငံရေးစနစ်ကို လက်တွေ့ကျကျ အဆင့်ဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု ယူဆသည်။ ယင်းသို့အဆင့်ဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မှာ လက်ရှိအခြေခံ ဥပဒေတွင် အပြောင်းအလဲများ လုပ်ရန်လိုအပ်နေသည်ဟု အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အချို့နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ တိုင်းရင်းသားပါတီများ၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် လေ့လာသူများက ပြောသည်။
အပြောင်းအလဲအတွက် အင်အားစုများ အားပြိုင်
လူထု သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားများက ရွေးချယ်မည့် နိုင်ငံရေးစနစ်သစ် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရာမှာ အဆုံးအဖြတ် ပေးရာတွင် နိုင်ငံရေးအားပြိုင်မှု ပုံစံသည် အရေးကြီး၏။ နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် နိုင်ငံရေးသမားတို့သည် လူထု၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှေ့ဆက်ရမည့် အကြောင်းများကို ပူးတွဲတွက်ချက်ရပေမည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲသည် အရေးကြီးသလို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (National League for Democracy – NLD)သည် နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် အစိုးရ ဖြစ်ချင်ကြောင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ ပွတ်ကာသီကာ မဟုတ်ပဲ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရချင်ကြောင်း NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နယ်လှည့်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တစ်ခုတွင် ပြောကြားထားသည်။
သို့သော် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို တပ်မတော် ကိုယ်စားပြု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (Union Solidarity and Development Party – USDP) ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်မှ လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းအတွင်းက ဖယ်ရှားခံလိုက်ရသည့် သူရဦးရွှေမန်းက မည်သည့် ပါတီမှ အပြတ်အသတ် အောင်နိုင်မည့် အခြေအနေ မရှိကြောင်း ပြောသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းတစ်ခုမှာ တိုင်းရင်းသား ပါတီများအတွက် မဲဆန္ဒနယ်မြေများ သတ်မှတ်ထားပေးလာနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် USDPပါတီ ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့များ၏ မလျော်သြဇာနှင့် အဂတိဆန်သော အပြုအမူများ ဖြစ်တတ်ခြင်း၊ ပါတီဝင်အချို့၏ အနေအထိုင် အပြောအဆို မောက်မာခြင်းကြောင့် အထင်သေးခံရခြင်း၊ ပါတီနှင့် ပြည်သူ တစ်သားတည်း မဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ပါတီ တစ်ဆက်တည်း မရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သူရဦးရွှေမန်းက ၄င်းပါတီကိုပင် ဝေဖန်ရေးလုပ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ပါတီ ကိုယ်ဝေဖန်ရေး လုပ်ခြင်းကို ကြိုဆိုစရာပါ။
ပါတီ၏အခြား ချွတ်ယွင်းချက်များတွင် အချို့ကိုယ်စားလှယ်များ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနည်းခြင်း၊ နေသာသလိုနေခြင်း၊ ပါတီမူဝါဒရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင် လေ့လာသိရှိအောင် လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းခြင်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း ၄င်းကထောက်ပြသေးသည်။
သူရဦးရွှေမန်းမှာ လက်ရှိအစိုးရ သက်တမ်းကာလ အတွင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့ခြင်းအပြင်၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့အလားအလာကောင်းများဖြစ်ရန် နှစ်ဦးတည်း ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသည့် ကိစ္စများသည်လည်း ယင်းသို့ ပါတီရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရသည့် အဓိက အကြောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ပယ်ခံရသည် ဆိုသော်လည်း ပါတီဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ရှိနေသေးသည့်အပြင်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယကနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားဆဲဖြစ်သည်။
သူရဦးရွှေမန်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နီးစပ်သူ၊ နားလည်သူများက ဝေဖန်စောကြောမှုများ ရှိလာသည်။ သူရဦးရွှေမန်းသည် အနည်းဆုံး ရွေးကောက်ပွဲပြီးသည်အထိ လက်ရှိ တာဝန်နေရာများတွင် ရှိနေမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး တောင်းဆိုထားသည့် ပါတီတစ်ရပ်ရပ်၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရပ်စဲနိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ပြဌာန်းနိုင်ရန်မှာ နှစ်လမှ သုံးလအထိ အချိန်ယူရတတ်သည်ဖြစ်၍ ယင်းကဲ့သို့သော ဥပဒေဖြင့် သူရဦးရွှေမန်းကို အရေးယူပြီး လွှတ်တော်မှ ဖယ်ရှားလျှင်လည်း ဤကာလမျှ အချိန်ယူရပေမည်။
တစ်ဖန် အပြောင်းအလဲများ တောင်းဆိုလာသည့်အတိုင်း တစ်သွေး၊ တစ်သံ၊ တစ်မိန့်အောက်တွင် နှစ်များစွာ အခွင့်ထူးခံဘ၀ဖြင့် ကျင်လည်ခဲ့ရသည့် လက်ရှိအာဏာရသူများမှာလည်း ယင်းအပြောင်းအလဲ ဒဏ်ကို မခံလို၍ ပြောင်းလဲရေးဘက်သို့ ယိမ်းလာသည့် ဦးရွှေမန်းအပြင် ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်သိမ်း အပါအ၀င် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် အချို့ကိုလည်း သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပါတီထိပ်တန်း ရာထူးများမှ ဖယ်ရှားလိုက်သည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်းတို့ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ကြမည် မဟုတ်တော့ပါ။ ၎င်းတို့ သဘောအလျောက် ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။
သမ္မတရုံး၏ ထင်ရှားဝန်ကြီးနှစ်ပါး ဦးအောင်မင်းနှင့် ဦးစိုးသိန်းတို့က တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖြစ် မဲပေးနိုင်သူ ၄၀၀၀/၅၀၀၀ လောက်သာရှိသည့် မဲဆန္ဒနယ်မြေ နှစ်ခုတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ကြမည့်အပြင်၊ USDP အလံတော်အောက်မှနေ၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် အငြိမ်းစားယူ တပ်မတော် အရာရှိ ၅၉ ဦးတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်းနှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး(ငြိမ်း) သူရဦးသက်ဆွေတို့ ပါဝင်သည်။ သမ္မတရုံး၏ အခြားဝန်ကြီး သုံးပါနှင့် လက်ရှိ ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောင်ခမ်းတို့ကလည်း USDP၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်။
ယင်းအခြေအနေများတွင် NLDက ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲအစည်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် မရွေးချယ်သည့်အပေါ် အပြစ်တင်မည့်အစား တိုင်းရင်းသား ပါတီများနှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရအောင် ၀န်းရံပြီး၊ တစ်ဖက်က ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု၊ တစ်ဖက်က တပ်မတော် အုပ်စုနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဟု စဉ်းစားစေလိုကြောင်း ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ပြောသည်။ NLD သည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်ရာတွင် အများပြည်သူက သိထားသည့် မျှော်လင့်ထားသည့် သူများမပါဝင်ကြပါ။ သိထားလျှက် မပါဝင်ခဲ့တစ်ဦးသူမှာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဒေါ်ညိုညိုသင်း ဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များသည် ရပ်တည်ချက် လုပ်ဆောက်ချက်ကောင်းများဖြင့် ထောက်ခံမှုအား ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း NLD ပါတီက တွဲမခေါ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်ကလည်း ပြောသည်။ ကိုယ်စားလှယ်စာရင်း ထွက်လာချိန်မှာ နေရာအတော်များများတွင် ၀င်ပြိုင်မည်ဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။ ရွေးချယ်ခံရခြင်း မရှိ၍ ပါတီကို မဟာမိတ် ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုများနှင့် တိုင်းရင်သား ပါတီများက ယုံကြည်မှု ကျသွားစေနိုင်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောစနစ် တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ရေးမှာ ယင်းသို့သော အားပြိုင်မှုများကို ရှင်းထုတ်ပစ်ဖို့ မလိုပဲ သင့်တင့်သော ရလဒ်ကောင်း တစ်ခုခု ပေါ်ထွက်ရန် စီမံသွားရမှာပါ။ သို့ရာတွင် အာဏာရ တပ်မတော် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များက လက်ရှိစနစ် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မှာကို လိုလားဟန်မရှိ။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်အောင်လှိုင်က နိုင်ငံရေ အာမခံချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းဖြင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို လျှောက်လှမ်းနေချိန်တွင် အဓိကမှာ တိုင်းရင်သားအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားများအကြား လုံးဝခွဲခြားမှု မရှိ၍ နိုင်ငံရေး အာမခံချက် ပေးလို့ရသည်ဟု ပြောနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ (UPWC)၏ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးက ယင်းကဲ့သို့ ယခုလဆန်းပိုင်းတွင် ကိုးကားပြောဆိုထားသည်။ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ပြောသလို ညီညွတ်ရေး လိုချင်ခြင်း ရှိ မရှိ ဦးရွှေမန်းအပေါ် လုပ်ဆောင်ချက်က လတ်တလော သက်သေတစ်ခုပင် မဟုတ်ပါလား။
အစိုးရသည် ယခုအချိန်အထိ နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို ဖြောင့်မတ်စွာ ဖြေရှင်းလိုသည့် စိတ်ဓာတ် မတွေ့ရှိရသေးကြောင်းနှင့် စစ်တပ်ကိုသာ အသုံးချသည့် နည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ထားဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလဇောင်ဟရားက သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်တွင် ကျရောက်သော ကချင်အာဇာနည်နေ့တွင် ပြောသည်။
Myanmar Peace Centreမှ ဦးလှမောင်ရွှေကလည်း၊ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများသို့ ရောက်ရှိရန်အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အဆင့်ကို ဦးစွာကျော်ဖြတ်ရန် လိုကြောင်း၊ အစိုးရဘက်က တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများအား လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ မူဘောင်ရေးဆွဲနိုင်ရေး မျှော်လင့်ထားကြောင်း၊ ယင်းနောက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားပါက နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ စနိုင်ရေး၊ မစနိုင်ပါကလည်း လက်ရှိ အခြေခံများနှင့် နောက်အစိုးရ လက်ထက်တွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အချိန်အကန့်အသတ် ရှိနေသည်ကို ရှင်းပြထားသည်။
လူထု၏ အခန်းဏ္ဍနှင့် မျှော်မှန်းချက်
ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာချိန်တွင် ပါတီတစ်ရပ် သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် အမတ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီသည် မျှော်မှန်းထားသည့် အောင်နိုင်ရေး ပြောဆိုလုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် လူထုသည် အကောင်းအဆိုး၊ အကျိုးအပြစ် အားပြိုင်ပြောဆိုချက်ဟု ရှုမြင်ပြီး၊ လူထုသည် အဆုံးအဖြတ်ပေးသူ နေရာတွင်ရှိသည်။ ယင်းသည် နိုင်ငံရေး အားပြိုင်ပွဲတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့သည် မဲပေးမည့်သူ တစ်ဦးချင်းစီ၏ စိတ်နှလုံးကို ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းရန် အားထုတ်ကြမည်၊ အားထုတ်ကြသည်။ နိုင်ငံသားတစ်ဦး နိုင်ငံရေးအကြောင်း စဉ်းစားခြင်းသည် တစ်ဦးချင်း၏ တာဝန်ယူတက်မှုဟု သဘောပိုက်ပါလေ။
ထိုသဘောကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သြဂုတ်လ၉ရက်၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး မင်းဘူးမြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် ဒေသခံ ပြည်သူလူထုကို ယခုကဲ့သို့ ပြောပါသည်။ “ပြည်သူသန်း၅၀ကျော်၏ ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် အသင့်ရှိနေသည့်အပြင်၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ထောင်ကျော်ကိုလည်း ကောင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်”ဟူသတည်း။
မဲပေးနိုင်သူ နိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်းသည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအပေါ် တရားသူကြီးတွေလိုပဲ နှစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ကြားက ပြဿနာနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းများကိုပဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ မဆိုင်သည်များကို ဘေးချိတ်ထားမည်။ ဥပမာ မည်သည့် ပါတီနိုင်စေလိုခြင်းထက်၊ တိုင်းပြည်နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ကောင်းစားရေးကို အမှန်တကယ် ဆောင်ကျဉ်းပေးမည့် ပါတီမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို မဲပေးပါ။ နှစ်များစွာ အချိန်ပေးခဲ့ရသည့် မဲပေးအခွင့်အရေးမို့ ကြောက်နေစရာမလို။
အလားတူပဲ ယင်းနိုင်ငံသားသည် နိုင်ငံရေးကို အာရုံမစိုက်သလောက် ဖြစ်နေသည့်အပြင်၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အနည်းဆုံး နှစ်ဦးအကြား ပြောဆိုအားပြိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ခြားနားချက်များကို နားလည်ရန် အားထုတ်ရပေးမည်။ သိကြသည့်အတိုင်း လွယ်ကူသည့်ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှုကား မကြာခဏဆိုသလို မဲပေးလိုသူများက အထူးတလည် စိတ်ဝင်စားသည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် နိုင်ငံရေးသမားများက ပြောဆိုသည်ကို ရှောင်ကျဉ်တတ်ကြသည် ။
ဥပမာ - အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နေရာပေါင်း သောင်းချီ၍ ဘယ်ကာလအတွင်းမှာ ဖန်တီးပေးမည်၊ အခြေခံ တစ်နေ့လုပ်အားခကို ဘယ်မျှအထိ တိုးမြှင့်ပေးမည်၊ လူအများစု လက်လှမ်းမှီ ၀ယ်ယူနေထိုင်နိုင်သည့် အိမ်ယာစီမံကိန်းများ ဘယ်လို အကောင်အထည် ဖော်ပေးမည် စသည်ဖြင့်တို့ကို ထင်မြင်ချက်မျှပင် ပေးလေ့မရှိပါ။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လူထုက မဲပေးရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ပီသနိုင်မှုနှင့် အနာဂတ် အတွက် အလုပ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်စားရမည်။
ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုများ၏ အတိုင်အဖောက်
ဒီမိုကရေစီ ပါတီကြီးများသည် အခြားဒီမိုကရေစီ ပါတီကြီးများမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အသိအမှတ်ပြု၊ အလေးထား စဉ်းစားလျှင် ပါတီအောင်နိုင်ရေး အတွက်လည်း အထောက်အကူ ကြီးမားပေမည်။
၈၈မျိုးဆက်ခေါင်ဆောင် ဦးကိုကိုကြီးဆိုလျှင် NLD၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း မခံရသည့်တိုင် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ရရှိနိုင်မည့် မဲပြားသွားနိုင်မည်ကို မလိုလား၍ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် မဟုတ်ဟု ဆုံးဖြတ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ၎င်း၏ရပ်တည်ချက်မှာ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု၊ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများကို ၀န်းရံ အားပေးမည်ဟုဆိုသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု တည်ထောင်သွားရန် သဘောရှိနေသည့် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမင်းကိုနိုင်ကလည်း တိုင်းရင်းသားနှင့် ဒီမိုကရေစီသမားတို့သည် နားလည်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဟု အားလုံးကိုယ်စား တင်ပြချင်ကြောင်းနှင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပြောင်လဲချင်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် နည်းလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် စဉ်းစားကြစေလိုကြောင်း ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ အဆင့်မြင့် ညှိနှိုင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ( SD )မှ ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက “ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်ရေးမှာ၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ရေးမှာ မရိုးသားရင် မရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ဟာ လူထုနဲ့ အတူထူ ထောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ပန်ကြားချင်တယ်” ဟုပြောဆိုသည်။
လူထုနှင့်အတူထူ ထောင်ဖို့ဆိုရာတွင် လူထုကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာပုံ၊ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စနစ်သစ်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် လူထုပါဝင်လာမှု အရေကြီးပုံ ( ဥပမာ - အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်း မပျတ်မကွက် မဲပေးရန်)၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိသားစု စကားဝိုင်း၊ မိတ်ဆွေစကားဝိုင်းပုံစံ သို့မဟုတ် လူထုဟောပြောပွဲ ပုံစံဖြင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးကြရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ၊ နိုင်ငံရေးသတင်း ရနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို အချင်းချင်း လက်ဆင့်ကမ်း အသိပေး ပြောကြားပေးကြရပေမည်။ လူထုသည် ပုံနှိပ်မီဒီယာကိုသာ အားကိုး နေရသေးသည်။ သတင်းရရှိရေး ပိုမိုထိရောက်သည့် ရုပ်/သံနှင့် ရေဒီယိုကို အစိုးရက ချုပ်ကိုင်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှ လူမှုကွန်ယက်များကို သတင်းဖယ်လှယ်ရေး အတွက် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြရသော်လည်း မှန်ကန်တိကျမှုကို စိန်ခေါ်နေသေးသည်။
အဓိက အလေးပေး ပြောကြားစေလိုသည်မှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် တိုင်းရင်းသား အင်အားစု ပါတီများက လွှတ်တော် အမတ်နေရာ အများဆုံး (တစ်ချို့ ပြောကြသည်မှာ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းအထိ) ရရှိရေးဖြင့်၊ ယင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဖြစ်သည်။ ယင်းအကြောင်းကိုကပင် လူထုအတွက် လေ့လာစရာနည်းလမ်း တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့လေ့လာရာတွင် အကောင်းဆုံး နားလည် သဘောပေါက်နိုင်ရန်မှာ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက် အမျိုးမျိုးကို စဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သာ လူထုသည် နိုင်ငံရေး အသိအမြင် အားကောင်းစေနိုင်၏။
နိုင်ငံရေး စည်းရုံးပွဲ အားလုံးနီးပါးတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ အမြင်အပေါ် မျှဝေခံစားတက်ပြီးသား ပရိတ်သတ်ကိုသာလျှင် ပြောကြား စည်းရုံးလေ့ရှိသည်။ မဲပေးမည့်သူများကို တက်ကြွစိတ် ၀င်စားလာစေမည့်အပြင် အားပေးတိုက်တွန်းဖို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် အားထုတ်လေ့ရှိ၏။
ဥပမာ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “စနစ်ကို ပြောင်းမှဖြစ်မယ်၊ စနစ်ကို မပြောင်းရင် မတိုးတက်နိုင်ဘူး၊ စနစ်တစ်ခုကို ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ ခဏခဏ လာတာမဟုတ်ဘူး။” ဟု ပြောသည်။ ထို့အပြင် “အစိုးရဟာ ပြည်သူရွေးချယ် တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရပဲ ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီလို အစိုးရကသာ ဒီမိုကရေစီကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်”ဟုလည်း ၎င်းကပြောသည်။
ထို့အတူ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေမှ တသီးပုဂ္ဂလအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးကလည်း ပြည်သူလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် လုပ်ချင်လို၍၊ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အသိပေးချင်ပါသည်။ လက်ရှိ ထင်ရှားသည်မှာ NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်သည်။ “အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကဖွဲ့မယ့် အစိုးရဟာ အဂတိကင်းစေရမယ်။”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မဲပေးမည့်သူများ၏ စိတ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် မဟုတ်သလောက် ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ သူ့အားထောက်ခံသူများကို ဖြောင်းဖြတည့်မတ်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင်မဲရုံသို့သွား၊ မဲပေးရန်သာဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက ယင်းသို့လူထုနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရခြင်းမှာ မဲပေးခွင့်ရှိသူ အားလုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးရာရောက်သည်။
ယင်းသို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၁၃၈က ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် NLDပါတီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အင်တိုက်အားတိုက် နိုင်ငံတစ်ဝန်း နယ်တကာလှည့် စည်းရုံး ဆောင်ရွက်နေစဉ် ၎င်း၏ ပြိုင်ဘက်ပါတီကြီး အာဏာရ USDPတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၁၄၇ က ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၆၆၅ဦး အပါအ၀င် အခြားပါတီများ၏ ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း ၁၅၁၈ ၀င်ရောက်ယဉ်ပြိုင်မည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုး မဲဆန္ဒနယ်မြေ စုစုပေါင်း ၁၁၇၁ နေရာရှိသည်။
အာဏာရ USDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထဲမှ မည်သူသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့ စည်းရုံးရေးဆင်းရင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံရေး ဗဟုသုတပေး လုပ်ဆောင်နေပါသလဲဟုေ မးခွန်းမထုတ်သင့်ပေလား။ စည်းရုံးရေးလုပ်ရန် မပြောနှင့် USDPသည် ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်ကနေ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်ရသည်ကိုပဲ အမိန့်သုံးပြီး အကွက်ချနေရရှာသည်။ တဖန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို အမြန်ဆုံး ပြဌာန်းပေးရန် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးကဦးရွှေမန်းထံ အစိုးရသက်တမ်း ကာလ လေးနှစ်အတွင်း (၄) ကြိမ်မြောက် ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ကြည့်လို့မကောင်း ကြားလို့မကောင်း ဖြစ်နေပြီလား။
စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများ ကြိုတင် လူသိထင်ရှား မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု မရှိပါပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ကြမည်ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ ၎င်းတို့ဝင်မည့် မဲဆန္ဒနယ်မြေကို အကြောက်တရား ဖြစ်စေပြီး ငွေကြေးသုံးစွဲ စည်းရုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဥပမာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲ မဲဆန္ဒနယ်မှ ၀င်ပြိုင်ရန် ကျပ် သိန်း ၃၀၀၀ အကုန်ခံပြီးပြီ။ မဲဆန္ဒရှင်များ သတိပြုစေချင်ပါသည်။ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဟု ဗန်းပြ၍ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတွင်းနက်၊ ချွတ်ခြုံကျနေပြီ။
ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်ဝင်မည့် ပါတီအလိုက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆင်းနိုင်ရန် ခေတ္တ ရပ်နားထားသည့် ၁၂ ကြိမ်မြောက် လွှတ်တော်ပုံမှန် အစည်းအဝေးများမှာ ရက်ကြာရှည်မည် မဟုတ်ကြောင်း လေ့လာသူ တစ်ဦးကပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေကြစဉ် လွန်ခဲ့သော လကုန်ပိုင်းမှ စတင်၍ တိုင်ဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်၁၂ခုတွင် ရေဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သော Myanmar Network for Free and Fair Electionက အခုလို ပြောပါသည် “ ရွေးကောက်ပွဲ အရှိန်ရပ်တန့်သွား သလိုပါပဲ။ တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါး သဘာဝဘေး အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံနေရာတာဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာ အာရုံမစိုက်နိုင်ကြဘူး၊ သွားရေးလာရေးတွေလဲ ခက်ကုန်တယ်။” ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများကို ပြည်တွင်းကရော၊ ပြည်ပ အကူအညီများဖြင့် အချိန်ယူရမည် ဆိုသော်လည်း အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ သိထားရန်မှာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြုံသလို အသုံးချပစ်ခဲ့၍ ယခုလိုမျိုး သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည့် ဗဟိုဦးစီးစနစ်အားကိုး အစိုးရ ထပ်မံမပေါ်ပေါက်ရေး အတွက် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်ရေးကို တစ်ဘက်ကလည်း ကြိုးစားပြင်ဆင်ကြပါဟု အားပေးပါ၏။
သို့ရာတွင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်ဟု ပြဌာန်းထားသော်လည်း ယခုဖြစ်စဉ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် နေ့ရက်နှင့် ရက်ပေါင်း၈၀ကျော်ခန့် ဝေးကွာသေးသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းရန် အကြောင်း မရှိပါကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ယခုလ အစောပိုင်းတွင် ပြောသည်။
ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ နိုင်ငံကို ပြန်လည် ထူထောင်ကြစို့
ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကမှာ ပါတီနိုင်ငံရေးတို့သည် စင်စစ်အားဖြင့် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းစီကို အားပြု၍ မြစ်ဖျားခံသည်။ ယင်းသို့ လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တွင် အလွန်အမင်း အားထားလွန်းလျှင် ပါတီ၏ အရည်အချင်းနှင့် ခိုင်မာအားကောင်းမှု တစ်နည်းဆိုရသော် အင်စတီကျူးရှင်း အားကောင်းမှုကို ထိခိုက်စေသည်။ ပါတီ၏ မူဝါဒနှင့် စည်းကမ်းများကို ဂရုစိုက်လွန်းလျှင်လည်း လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်း၏ အရေးပါမှု မှေးမှိန်သွားတတ်သည်။ USDP၏ လက်ရှိ ပြဿနာက ထိုသဘောဆန်သည်။
ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းက “သဘောကွဲလွဲမှုတွေ မဖြစ်အောင် ညှိနှိုင်းရမယ်။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေတောင်မှ ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ တစ်ဝိုင်းတည်း ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်သင့်ပြီလို့ထင်တယ်။” ဟုပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးရေချိန်သည် မျိုးဆက်တစ်ဆက်မှ နောက်မျိုးဆက် တစ်ဆက်သို့ လက်ဆင့် ကမ်းပေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပုံ မရသေးပါ။ အဓိက အဟန့်အတားမှာ စစ်အာဏာရှင်တို့ ဖြစ်ပေမည်။
သို့သော်လည်း “၂၀၁၅ ခုနှစ်ဟာ အကွေ့အပြောင်းတစ်ခုကို ရောက်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ သွားနေတဲ့နှစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် အားလုံးပါဝင် ပြောင်းလဲရန်နဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုစေမယ့် စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါ၊ နိုင်ငံတကာမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ နိုင်ငံတော် အဖြစ် ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ကြပါ။”ဟု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဖြစ်ခဲ့သော NLD သဘာပတိအဖွဲ့ နာယက ဦးတင်ဦးက ပြောသည်။
Posted by Alex Aung at 12:38 PM